नेपाल आज | कोरोना महामारीको दोस्रो छाल, किन यसले भारतमाथि यति ठूलो विनाश गर्यो ?
बिहिबार, ०६ माघ २०७८
कोरोना महामारीको दोस्रो छाल, किन यसले भारतमाथि यति ठूलो विनाश गर्यो ?
मङ्गलबार, ०७ बैशाख २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
यस वर्षको मार्चको शुरुमा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धनले घोषणा गरे कि भारतमा कोविड १९ महामारी अब ’अन्त्य ’ तिर बढेको छ ।
यस घोषणाको साथसाथ स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको प्रशंसा गरेका थिए र भनेका थिए “यसले विश्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि बाटो देखाएको छ । भारतले यसको धेरै प्रचारित ’खोप डिप्लोमेसी’ अन्तर्गत जनवरीदेखि नै अन्य देशहरूलाई खोपहरू आपूर्ति गर्न सुरु गर्यो।
यस तरिकाले, कोरोना भाइरसको उन्मूलनको उत्सव गत वर्षको अन्त्यबाट शुरू भयो । राजनीतिज्ञदेखि लिएर नीति निर्माता र मिडियाको एक वर्गसम्म यो कुरा स्वीकार्य थियो कि भारत अहिले यस कठिनाइबाट बाहिर आएको छ ।तर भारतमा जसरी कोरोना भाईरस प्रति सर्वसधारणहरु सचेता हुनुपर्ने हो त्यसमा विस्तारै कमि आएपछि यसले भयावह रुप लिएको छ । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड ५० लाख नाघेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सोमबार जनाएको छ ।सो मन्त्रालयले सोमबार दिएको जानकार।ीअनुसार कोरोना शुरु भएयता भारतमा हालसम्म १ करोड ५० लाख ६१ हजार ९१९ जना कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् ।
भारतमा कोरोनाभाइरसबाट एकै दिनमा दुई लाख ७३ हजार ८१० सङ्क्रमित भएका छन् । त्यसैगरी सोही अवधिमा भारतमा एक हजार ६१९ जनाको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको सोमबार जनाइएको छ । पछिल्लो विवरणसँगै भारतमा कोरोनाभाइरसबाट कुल मृतकको सङ्ख्या एक लाख ७८ हजार ७६९ पुगेको देखिएको छ ।
भारतमा अहिले पनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाहरुको सङ्ख्या भने १९ लाख २९ हजार पुगेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा एक लाख २८ हजार १३ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमणमुक्त भएको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । योसँगै अहिलेसम्म सङ्क्रमणमुक्त भएकाहरुको कुल सङ्ख्या एक करोड २९ लाख ५३ हजार ८२१ पुगेको छ ।
भारतमा गत जनवरी १६ बाट कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप अभियान शुरु भएको थियो सो समयबाट अहिलेसम्म भारतमा १२ करोड ३८ भन्दा लाख व्यक्तिले खोप लगाएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिने क्रम एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप चलाउने क्रम पनि चलिनै रहेको छ ।
भारतमा अहिले कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सीन र स्पुट्नीक भी गरी तीन प्रकारका खोपको प्रयोग भइरहेको सरकारी निकायहरुले जनाएका छन् । रुसले विकास गरेको स्पुट्नीक भी भने यही अप्रिल १२ देखि मात्रै लगाउन थालिएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
भारतमा आइतबार मात्रै १३ लाख ५६ हजार १३३ जनाको कोरोना परिक्षण गरिएको भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ । अप्रिल १९ सम्म कूल २६ करोड ७८ लाख भन्दा बढीले कोरोना परीक्षण गरिएको पनि परिषदले उल्लेख गरेको छ ।
भारतको राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली सवभन्दा धेरै कोरोना प्रभावित राज्यको रुपमा रहेको छ । दिल्लीमा आइतबार एकै दिनमा २५ हजार ५०० जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका १६१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना महामारी नरेन्द्र मोदी हर्षवर्धन भारतमा कोविड १९ महामारी
पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले साउदी राजदूतसँगको भेटमा अपमान गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना
बुधबार, ०५ माघ २०७८
बेल्जियमका नागरिक समाज समूहहरूले बेइजिङ ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गर्न ईयूलाई आह्वान
आइतबार, ०२ माघ २०७८
भारत र नेपालका स्टार्टअप इकोसिस्टमहरु बीचको सम्बन्धका विषयमा काठमाडौंमा सम्मेलन हुदैँ
हिमानी शाह किन पुगिन अमेरिका ? यस्तो छ योजना
के पाकिस्तानी मिडियामा काम गर्ने पत्रकारले बनाएका हुन यस्तो भिडियो ?
चीनियाँ राजदुत होउ यान्छीलाई देश निकाला गर्न माग
पेण्डुलम प्रधानमन्त्रीः दाह्रानंग्रा फैलाउँदै प्रचण्ड, एआईजी वढुवामा एक भाग